Amathiphu okuvakashela e-Costa Rica: Amadokhumenti, ezempilo kanye ne-gastronomy | Izindaba Zokuhamba
Amathiphu okuvakashela e-Costa Rica
Luis Martinez | | Amathiphu, Costa Rica
I-Los Amathiphu okuvakashela e-Costa Rica zidingeka kakhulu kunangaphambili ngenxa yokwanda kwezivakashi izwe laseMelika Ephakathi elibhekana nakho. Njalo ngonyaka ithola izivakashi eziningi ngenxa yezimangaliso zayo zemvelo, isimo sezulu sayo esimnandi, yayo amabhishi okuphupha kanye nenani labantu abamukelayo.
Ngokuqondene neyokuqala, iye ezinye iziqiwu zikazwelonke ezingamashumi amathathu yazo zonke izinhlobo nosayizi. Njengezibonelo, sizokhuluma ngentaba-mlilo yase-Arenal, ulwandle i-Ballena noma i-Coco Island. Ngakolunye uhlangothi, i-climatology ezishisayo, enamazinga okushisa afanayo unyaka wonke, nakuba futhi enenkathi yemvula ende. Futhi, mayelana nezakhamuzi zakhona, isiqubulo sayo sesidumile "Pure Life" njengophawu lwethemba lakhe elibalulekile. Ngenxa yazo zonke lezi zizathu, sicabanga ukuthi kuyadingeka ukukunikeza amathiphu okuvakashela eCosta Rica.
1 Izinyathelo zenhlanzeko
2 Imithwalo kanye nemibhalo yokungena ezweni
3 Isikhathi esingcono kakhulu sokuvakashela eCosta Rica nokuphepha
4 Amathiphu okuvakashela e-Costa Rica mayelana nokudla
5 Okunye ukuvakasha okungagwemeki e-Costa Rica
5.2 Amathiphu okuvakashela e-Costa Rica: Amapaki Kazwelonke
I-Paseo de Colón eSan José, eCosta Rica
Awukho umgomo oyimpoqo ukuze ungene e-Costa Rica. Nokho, uMnyango Wezempilo utusa okunye. Ngokuqondile, imigomo i-hepatitis A no-B, kusuka i-tetanus kanye ne-diphtheria futhi we i-typhoid fever. Ngokuqondene ne-COVID-19, akuphoqelekile, kodwa sikweluleka ukuthi ugonywe uma ungakakwenzi lokho, ngaphandle kwalokho bazodinga umshwalanse we mpilo ukungena ezweni futhi, ngaphezu kwalokho, bangakucela isitifiketi sokugoma ukuze bafinyelele ezindaweni eziningi.
Kunoma ikuphi, kungakhathalekile ukuthi ubhubhane luni, kuyancomeka ukuthi uthathe umshuwalense wezempilo, njengoba iCosta Rica neSpain. abanazo izivumelwano zezempilo. Ngakho-ke, uma ugula, kuzodingeka ukhokhe izindleko zosizo.
Ngakolunye uhlangothi, ngaphandle kwasezindaweni zasemakhaya ezingathuthukisiwe, Ingabe ayaphuzwa amanzi ezweni laseMelika Ephakathi. Isibonelo, engxenyeni yeTortuguero, akufanele uyithathe. Kunoma yikuphi, ukugwema izinkinga, sikweluleka ukuthi uhlale uphuza amanzi asemabhodleleni.
Kufanele futhi ube nenhle oxosha omiyane. ECosta Rica maningi kanti amanye asakaza izifo. Futhi, zama ukugqoka imikhono emide ebusuku.
Imithwalo kanye nemibhalo yokungena ezweni
Owokuqala, kuwumthetho ojwayelekile ukuthi ugcine amadokhumenti akho kanye nemali igcinwe kahle ukuze ingantshontshwa. Kunoma yikuphi, hlala uphethe a ikhophi yepasipoti yakho ukuyikhombisa uma ilahlekile noma yebiwe.
Ikulungele futhi ukuthi uyiphathe ezinye izingubo ezifudumele. Nakuba isimo sezulu sisihle, siyashintsha sisuka kwenye indawo siye kwenye eCosta Rica. Emabhishi kungaba ama-degree Celsius angamashumi amathathu, kodwa ezindaweni ezingaphakathi ungazithola usengxenyeni yokushisa. Ngokuqondene nezicathulo, thatha izinhlobo ezimbili: ama-flip-flop ogwini kanye nalawo akhululekile ohamba ngezinyawo kanye nemizila yezintaba.
Futhi, faka emthwalweni wakho a i-adaptha yamandla. Ezweni laseMelika Ephakathi, amapulaki awuhlobo lwe-A/B, kuyilapho eYurophu eyi-C. Ngakho-ke, uzoyidinga ukuze ushaje izinto zakho zikagesi.
Ngakolunye uhlangothi, ukungena eCosta Rica, uzodinga ipasipoti kanye nalokho okuthiwa iphasi yezempilo, ongayilanda kwenye yezingosi zezempilo zikahulumeni wezwe (https://salud.go.cr/). Ngokunjalo, njengoba sishilo, uma ungagonyiwe, kuzodingeka ukuthi uthathe umshwalense wezokwelapha. Lokhu futhi kuphoqelekile kulabo abangaphansi kweminyaka engu-18, nakuba benjalo.
Isikhathi esingcono kakhulu sokuvakashela eCosta Rica nokuphepha
I-Playa Blanca, e-Cahuita National Park
Kuyo yonke into esikuchazele yona ngaphambilini mayelana nesimo sezulu, uzobe uphethe ngokuthi isikhathi esingcono kakhulu sokuvakashela izwe laseMelika Ephakathi inkathi eyomile. Yena kusukela ngoNovemba kuya ku-Ephreli. Kodwa kufanele wazi ukuthi, uma uhamba ngenkathi yemvula, amanzi ngeke ehle usuku lonke, njengoba kwenzeka kwezinye izindawo ezishisayo. Maningi amathuba okuthi line, kodwa kuzoba nezinsuku ezomile. Futhi, njengoba isizini ephansi, amanani akholeka kakhulu.
Mayelana nokuphepha, iCosta Rica kuthulekile. Nokho, kunezindawo zasemadolobheni amakhulu ezingaba yingozi ebusuku. Ngokwesibonelo, abanye baseSan José noma ePuerto Limón. Kunoma yikuphi, qaphela.
Ngakolunye uhlangothi, imali esemthethweni ikholoni futhi sikweluleka ukuthi uyibambe ngaphambi kokuthi uhambe. Ngakho-ke, uzogwema ukubheka izindlu zokushintshisana eCosta Rica. Futhi, khumbula ukuthi amakhadi amaningi esikweletu akhokhisa imali enkulu uma uwasebenzisa phesheya.
Nokho, amanye amabhange anikele amakhadi okuhamba ukuthi abanazo. Ngokufanayo, futhi idola ngisho ne-euro yamukelwa. Kodwa, uma kwenzeka ukhokha nganoma iyiphi yalezi, i-akhawunti izobiza kakhulu.
Okokugcina, mayelana nokuphepha kwakho, sifuna ukukutshela ukuthi unakho qaphela imigwaqo. Ukuhamba kwezimoto ezweni laseMelika Emaphakathi kunesiphithiphithi futhi akuvamile ukubona ukujika okungalungile noma ukudlula. Ngakho-ke, uma ufuna ukuqasha imoto, qaphela. Ngalo mqondo, sincoma ukuthi ukwenze ukuze ube nenkululeko eyengeziwe yokuhamba. Futhi nokuthi ukhetha uhlobo lwe-4 x 4 olunomshwalense ophelele ukuze ukwazi ukufika noma yikuphi.
Amathiphu okuvakashela e-Costa Rica mayelana nokudla
Ipuleti le-gallo pinto
Isincomo sokuqala okufanele sikunikeze sona mayelana nokudla kwezwe laseMelika Ephakathi ukuthi, uma ufuna ukudla kahle ngemali encane, bheka izikhungo ezaziwa ngokuthi. ingadi. Ziyizindawo zokudlela ezincane zasendaweni ezinezidlo ezijwayelekile nezimnandi nezintengo ezishibhile.
Ngokuqondene ne-gastronomy, eyaseCosta Rica imnandi. Kungumphumela wokuhlanganiswa kwendabuko, ukudla kwaseMedithera nezinye izakhi zase-Afrika. Kodwa into engcono kakhulu ukuthi sikubonise ezinye zazo izitsha ezivamile tastiest futhi lokho, kunjalo, sincoma ukuthi uzame. Amathiphu ethu okuvakashela e-Costa Rica angeke aphelele uma singakutshelanga nge-gastronomy yayo.
Kuyindaba ye- iqhude elinamabala, ethandwa kakhulu kangangokuthi idliwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku, nakuba ngokuvamile yenzelwa ukudla kwasekuseni. Naphezu kwegama layo, ayiphathi inkukhu noma isikhukhukazi. Kuyingxube yerayisi, ubhontshisi, u-anyanisi, upelepele omnandi kanye ne-cilantro edliwa yodwa noma njengendlela yokuhlobisa kwezinye izitsha. Ngaphandle kokungabaza, iresiphi ejwayelekile kakhulu yaleli zwe laseLatin America.
Kodwa futhi udumile oshadile, inamandla kakhulu kunangaphambili. Eqinisweni, besingakutshela ukuthi kuwukudla okuphelele. Isekelwe ohlotsheni oluthile lwenyama njengengulube noma inyama yenkomo, kodwa ingashintshwa ngenhlanzi ngisho nesitshalo seqanda noma isoya. Ngaphezu kwalokho, kuhlanganisa irayisi enolisiwe noma i-pasta, amaqanda nemikhiqizo yemifino.
Njengoba uzobona, irayisi Kuwukudla okuyisisekelo kwe-Tico cuisine. Isetshenziselwa nezinye izitsha eziningi ezifana irayisi ngezinhliziyo zesundu, esihlanganisa nehlumela noma inhliziyo ye pejibaye, uhlobo lwesundu. Kodwa amasaladi, i-mincemeat kanye ne-stuff loin nakho kujwayelekile kakhulu.
Ngokwengxenye yayo, i i-chifrijo Iqukethe ama-rinds engulube, irayisi, ubhontshisi, ukwatapheya nama-tortilla ommbila othosiwe, konke okufakwe isoso sohlobo lwe-chimichurri. Futhi i isitshulu se-creole Inenyama, amasoseji, imifino, uphizi, amaqanda abilisiwe, ama-olives, ama-plums noma omisiwe, u-anyanisi kanye nopelepele omnandi.
Ngokuqondene ne amasobho, sincoma tripe noma meatballs futhi, mayelana tamalesEzigcwele inhlama ye-plantain eluhlaza noma ezenziwe ngenhlama yomdumbula zimnandi. Ngokuphathelene nalezi zamuva, nazo zithandwa kakhulu aboshiwe, amanye ama-croquette enziwe ngayo anoshizi, inyama noma inkukhu.
Okunye ukuvakasha okungagwemeki e-Costa Rica
Ukuze siqedele amathiphu ethu okuvakashela eCosta Rica, sizokhuluma kafushane ngezinye izindawo okufanele. Ukwenza lokhu, sizoqala ngenhloko-dolobha bese siwakhomba ezweni lonke.
I-National Theatre yaseCosta Rica, eSan José
Yasungulwa ngo-1738, inhloko-dolobha yezwe yachazwa emhlabeni jikelele isiko Square, lapho ungabona khona Inkundla yaseshashalazini kaZwelonke, umfanekiso we-Opera EParisfuthi i igolide Museum. Kodwa okuvelele kakhulu ngokombono oyisikhumbuzo weSan José yiwo izakhiwo zesitayela se-neoclassical, eziningi zazo ezakha i Indawo ka-Amoni, kanye nabanye eclectic ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili. Phakathi kwalokhu kwakamuva, i Inqaba yaseMoor, okumangalisayo Isakhiwo seposi ne-Telegraph (futhi neoclassicist) noma lowo osesikhungweni samamuvi.
Ngokwengxenye yayo, i-neoclassical ihlanganisa ne Inkundla yaseshashalazini kaZwelonke futhi i I-Catedral Metropolitana, eyakhiwa ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX. Eduze kwayo, ungavakashela amanye amathempeli amahle njenge Amasonto eNkosikazi Yethu yaseLa Merced naseLa Soledad.
Amathiphu okuvakashela e-Costa Rica: Amapaki Kazwelonke
I-Arenal Volcano National Park
Ngokuqondene nalo lonke izwe laseMelika Ephakathi, ungavakashela amadolobha amahle njenge Cartago, enye yezindala; I-Puerto Limón, mhlawumbe ichweba layo elibaluleke kakhulu; UMonteverde, ilungele i-ecotourism; Alajuela, ngaseCentral Cordillera, noma Puntarenas, onqenqemeni loLwandlekazi iPacific.
Kodwa izivakashi ezinkulu zaseCosta Rica imvelo yakhe. Njengoba sesike sanitshela, inamapaki kazwelonke angamashumi amathathu. Phakathi kwazo, kubalulekile ukusho I-Corcovado's. Yize indawo yayo ikude kakhulu, njengoba iseNhlonhlweni ye-Osa, sincoma ukuthi uyivakashele ngoba ihlala kuyo okuwukuphela kwehlathi lemvula eliyinhloko emhlabeni.
Kuyamangalisa futhi I-Ballena Marine National Park. Njengoba igama layo liphakamisa, ungabona izilwane ezincelisayo ezinkulu njengomkhomo we-humpback noma amahlengethwa anamachashaza namabhodlela, kanye ne-scuba diving.
Umlingiswa ohluke kakhulu une I-Rincon de la Vieja National Park, eliqanjwe igama elifanayo ngenxa yegama elifanayo lentaba-mlilo ongafinyelela isiqongo sayo ngezinyawo futhi lapho usuka khona unombono omangalisayo weNhlonhlo YaseNicoya neChibi laseNicaragua.
Kafushane, singancoma amanye amapaki amaningi afana i-Tortuguero, lapho ungabona khona ukuzalela kwezimfudu zasolwandle, i Intaba-mlilo yase-Arenal, the Isilevu noma i lobungane, ochungechungeni lwezintaba zaseTalamanca.
Sengiphetha, sikunikeze okunye Amathiphu okuvakashela e-Costa Rica. Kodwa futhi besifuna ukukubonisa ezinye zezindawo okufanele uzivakashele kuleli zwe lase-Central America, elingelinye lamahle kakhulu emhlabeni futhi elinabantu abadume ngokuba nempilo futhi abamukelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » Costa Rica » Amathiphu okuvakashela e-Costa Rica
Amasiko angavamile emhlabeni
Izindawo zokuhlala e- Cadaques